Sii hayaha wasiirka Maaliyadda oo ka qeybgalay munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka wasaaradaasi – Radio Muqdisho
Sii hayaha wasiirka Maaliyadda oo ka qeybgalay munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka wasaaradaasi
Sii hayaha xilka wasiirka Maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane ayaa ka qeybgalay munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka wasaaradaasi.
Munaasabadda oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay xildhibaano, ururada haweenka iyo marti sharaf kala duwan.
Xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiayay wax qabadka wasaaradda, iyagoo sheegay in la dar dargeliyay howlaha wasaaradda, waxeyna sii hayaha wasiirka Xuseen Cabdi Xalane ugu hambalyeeyeen shaqada uu ka qabtay wasaaradda.
Sii hayaha wasiirka Maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane ayaa kula dar daarmay shaqalaha iyo howlwadeennada wasaaraddaasi ineey sii dardargeliyaan shaqada ay u hayaan wasaaradda, si loo gaaro himilooyinka la higsanayo.
R/wasaaraha magacaaban oo balan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh
wasaaradda dhalinyarada oo maanta daah furtay mashruuc shaqo abuur u ah dhalinta Soomaaliyeed